iMovie: Download talinayo iMovie plugins
Talinayo iMovie plugins & Tools Faa'iido leh
iMovie users Mac u saamaxaaya in ay xaalkaa videos qalabka aasaasiga ah iyo muuqaalada. Laakiin iyadoo la kaashanayo plugins iMovie kala duwan iyo qalab kale, hawlaha video tafatir dheeraad ah oo casri ah waxaa la samayn karaa. Halkan 10 talinayaa iMovie fur-tago ka dhigi doonaa waayo-aragnimo dheeraad ah iMovie qanco oo xiiso leh.
DownloadHelper yahay Firefox kordhin xor ah oo waxtar u duuban iyo diinta videos ka goobo badan daqiiqo gudahood. Waxay ku siisaa waxa fududaanaya in content heli karaa in lagala soo bixi doona biraawsarkaaga, si aad u adeegsan kartaa content ee mashruuca iMovie aad.
Baro wax badan oo ku saabsan DownloadHelper >>
Filp4Mac waa mid fudud oo wax ku ool ah oo xal haddii aad u baahan tahay inuu ciyaaro wmv ama WMA files aad Mac. Ka sokow in, waxa kale oo aad u bedeli karaan iyo dhoofinta wmv video for iMovie aan abuuro tayada dhaawac H.264 files. Halkii, hooyo AIC (Apple Dhexe codec) file loo abuuray, iMovie si looga fogaado transcoding dheeraad ah marka loo dhoofiyo.
Baro wax badan oo ku saabsan Filp4Mac >>
piStabilize kaa caawin karaan inaad hoos u gariir iyo vibrations lugahooda video by yeeesha dhaqaaq dhakhso ah oo caadi ahaan lagu soo bandhigay by kamaradaha gacanta lagu qabto. Waxa kale oo uu isticmaalaa farsamo zoom firfircoon smart si loo hubiyo in zoom waxaa laga codsadaa oo kaliya halkaas oo ay lagama maarmaan tahay.
Baro wax badan oo ku saabsan piStabilize >>
# 4. Miidda ah GreeThree
Miidda ah GreeThree bixisaa plugins iMovie ugu caansan. Waxay leedahay dhowr mugga heli karo, mid kasta oo la soo ururiyey oo ku saamaynta, kala guurka iyo qaababka kale ee dheeraad ah ee aad iMovie, oo ay ku jiraan tafatirka multi-camera, keegag horena, gacanta ku jir muhiimka ah iyo in ka badan.
Badan oo ku saabsan miidda ah GreeThree Baro >>
iBubble bixisaa 13 Hababka kala duwan ee iMovie. Waxaa ka mid ah ururinta goobooyinka hadalka, goobooyinka fikirka ah, sumadaha, sumadaha fallaadhaha, iyo qoraalka la saamaynta gaar ah. Waxaa sidoo kale leeyahay user graphic interface u gaar ah si ay u meel aad horyaal meesha aad rabto.
Baro wax badan oo ku saabsan iBubble >>
MPEG Streamclip waa video Converter xor ah oo awood badan, ciyaaryahanka, editor u MPEG, QuickTime, iyo durdurrada dushooda gaadiidka iyo iPod. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo video ama xataa DVD in qaabab kala duwan haddii aad files warbaahinta uma lihin iMovie.
Baro wax badan oo ku saabsan MPEG Streamclip >>
# 7. Dhiiran
Dhiiran waa il furan oo taariikhqorihii free caanka digital audio iyo editor. Sidaa daraadeed, waxaad ku qori karta iyo ciyaaro daafaca dhawaaqa, edit via cut, nuqul iyo Jinka (oo leh heerar aan xad lahayn ee tirtireyso), ka saar dhawaaq xagga danbe ah iyo wixii la mid ah. Waa arrin waxtar leh haddii aad rabto in aad wax ka bedel aad file maqal ah ka hor inta uusan u soo degida in iMovie
Baro wax badan oo ku saabsan dhiiran >>
iStopMotion waa qalab si sahlan loo isticmaali animation stop mooshinka iyo waqti duubo darajo. Waxa uu diiradda saarayaa oo perfects farshaxanka loox hal qabsaday. Marka aad record animation, kaliya dhoofin in iMovie in xaalkaa, ku dar horyaal iyo saamaynta dhawaaqa.
Baro wax badan oo ku saabsan iStopMotion >>
# 9. Guba
Gubashada waa CD fudud laakiin waxtar leh iyo DVD gubi u Mac. Waxay kaa caawinaysaa in aad u gubi files si aad u disc ah si aad u heli karto ka dib on. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa qaar ka mid ah goobaha sida sare, rukhsadda file, icon disc ah, taariikhaha file oo dheeraad ah oo ku Daqsi in isbatooraha Burns.
Video Space xisaabinaysa inta aad meel footage aad keeno qaadan doonaa. Waxaad sidoo kale ku xisaabin kartaa waqti ay ku meel ama meel ay markii sida ka muuqata dhinaca falaartu u dhexeeya labada meelaha la gelin. Sidaas awgeed waxa aad u faa'iido badan marka aad u dhameystiro mashruuc.
Dheeraad ah ka baro Video Space >>
> Resource > iMovie > iMovie: talinayo iMovie plugins & faa'iido leh Tools